AMD manala mpiasa marobe izay mpampivelatra Linux Kernel | Avy amin'ny Linux
AMD dia mandroaka mpiasa marobe izay mpamorona kernel Linux
avy amin'ny Libuntu Tonga aty amiko ity vaovao ity, izay avy aminy avy Phoronix.
Mitranga ny fandroahan'ny AMD Andreas Herrmann, Robert Richterary Borislav Petkov (Mandrak'izao).
Azontsika atao izany ny mamintina izany ao amin'ny lisitry ny mailaka Kernel, izay nanondroan'izy ireo fa tsy manana mailaka ___@amd.com intsony ireto olona telo ireto.
Inona no nataon'ireto? … Izy ireo dia tompon'andraikitra tamin'ny lahasa fototra sy manan-danja amin'ny fampifanarahana AMD / Ati ao anaty kernel, manokana: cpufreq, powernow-k8, fam15h_power, ary AMD Microcode.
Araka ireo tranonkala ireo:
Toa ny AMD dia handroaka ireo mpamorona hafa izay manampy amin'ny fitazonana ny fanohanana ny Linux. Fantatra fa hanafoana ny 15% amin'ireo mpiasa injenierany ny orinasa.
Tsy mbola vita isika ...
Namaky lahatsoratra iray hafa aho izao Phoronix antsoina hoe: Marina tokoa fa very amina mpamorona Linux ny AMD.
Tsy hiresaka aminao momba ny vinavina misy aho, hiezaka ny hampiseho aminao ny zava-misy mivaingana fotsiny aho izao ... 😀
Ankehitriny dia ampiana amin'ny lisitra: Joerg roedel, izay ao amin'ilay lisitra mailaka iray ihany no nanambara fa tsy mahazo miditra amin'ny mailaka intsony izy ao amin'ny AMD.com/ Joerg (Alemanina hafa) dia mitandrina ny fitazonana ny fanohanan'ny AMD IOMMU (AMD-VI) ao anaty kernel, ary manazava fa nandray anjara tamin'ny Linux mandritra ny 5 taona mahery.
Manoro hevitra aho ny hamaky ny lahatsoratra amin'ny Phonoix ho an'ireo mpanafika kosa,… tsy isalasalana fa misy olana goavana any AMD Alemana.
Eny ... raha teo aloha (ankehitriny) ny fanohanan'ny AMD / Ati amin'ny rafitray Linux no voatana, aorian'io ... Andriamanitra ô, tsy hitako izay eritreretina O_O
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » GNU / Linux » AMD dia mandroaka mpiasa marobe izay mpamorona kernel Linux
Naharikoriko ahy foana ny zavatra AMD / ATI rehetra, fa izao dia halany hatramin'ny farany.
Ny voamadinika dia ny tiako kokoa ny AMD mihoatra ny Intel amin'ny resaka CPU 🙁 ...
Manana izany fahatsapana izany koa aho. ny birao birao nomeko ny rahalahiko herintaona lasa izay dia karatra sary cpu sy AMD.
Hividy intel na lafo toy inona aza izy ireo.
Eny eny, lafo kokoa izy ireo, saingy izy ireo no manome ny fanohanana be indrindra amin'ny Linux.
Mampalahelo fa manana izany toe-tsaina izany ireto orinasa ireto.
Ny CPU an'ny pc misy ahy dia AMD, ary tiako manokana ny AMD, saingy izao miaraka amin'ny antony marimaro kokoa fa TSY Hividy na inona na inona amin'ny AMD aho, toa hitako fa tena ratsy ny paikady arahinareo.
Mendrika tehaka i Nvidia amin'ity lafiny ity.
Mahaliana. Tonga any Linux ny Steam miaraka amin'ny fampisehoana ambony noho ny Windows ary amin'ny AMD dia mandroaka ireo tompon'andraikitra amin'ny fanohanan'ny ATI ao anaty kernel izy ireo. Kisendrasendra ve ???
Toy izany koa no noeritreretiko. Tena mampiahiahy.
Toy ny hoe "mahazo" fampisehoana tsaratsara kokoa tsy misyHatreto dia dokam-barotra Valve fotsiny io ary tsy misy mahalala afa-tsy "azy ireo."
Inona izany fa be dia be ny olona nilaza fa "Valve efa ho vonona sy niresaka momba ny" dia manaisotra mpamily Linux izy ireo ary mitranga izany ary tsy hanana fomba intsony hanohanana ny fisavoritahana miaraka amin'i Steam.
NOOOO! satria tonga tato amiko ny fananana karatra ati …… TT ^ TT
Tsara toy inona no hitako tamin'ny fotoana D: Te hanana AMD + Radeon aho izao, Full Intel na Intel + Nvidia izao ary dia izay.
Eny ary aho hamorona gpu misy ahy miaraka amin'ny lalao filalaovana kisendrasendra sy malaina
hadino tokoa ny gpu sy ny filokana, ah, hadinoy izany.
Ity karazan-kevitra ity dia manamarina ny fisian'ny bokotra "J'aime"
ary te hividy ATI ¬ ¬ *
mieritreritra aho fa hiverina any nvidia amin'ny manaraka fa mividy pc
Salama tsara aho amin'ny tahan'ny sara / kalitaon'ny AMD, saingy mieritreritra aho izao fa tsy maintsy manangona sy mampiasa Intel.
Ary ity orinasa ity dia mpikambana GOLD ao amin'ny Linux Foundation? HA! Tokony horoahin'izy ireo izy !!!
Tsy maintsy nandroaka ny vola kely nomeny koa izy ireo ary tsy mino aho fa ny Linux Foundation dia tena nomena ny tsy hanao an'i Don Dinero.
Aza adino ity horonan-taratasy ratsy nataoko ity: S
Ny PC misy ahy ankehitriny sy taloha dia AMD ary ny sary mitambatra an'io dia ATI izay naharitra 6 MONTHS.
Efa nolazaiko tao amin'ny IRC io indray andro, ny andro andehanako hanatsara ny fitaovako handeha ho any amin'ny Intel na Intel + Nvidia board (ilay ananako dia 4 taona ary mety amiko)
Mampalahelo tokoa izany rehetra izany ary "azo antoka" fa ny AMD dia tsy miraharaha ny fihetsitsika.
Raha ny ahy dia efa nazava tamiko foana momba izany, tsy mbola nividy solosaina hilalao lalao aho, aleoko mampiasa ny fahasamihafana amin'ny console. Noho izany antony izany dia misafidy Intel foana aho ...
Faly aho amin'ny "sary lafo indrindra" sy "sary ratsy indrindra" an'ny Intel-ko! hehe ..
Tsy miraharaha ny hafainganana sary na 3D aho, raha toa ka mbola saika tsy misy olana ny kininina, ary rehefa manana aho dia afaka mamaha azy io amin'ny alàlan'ny fikarohana ao amin'ny google ihany ..
Tsy fantatro ny hafa, satria ireo Notebook nandalo ny tanako dia nisy Intel nipetraka tao anatiny.
Ny vahaolana tokana dia ny fampitsaharana ny fividianana amin'izy ireo, ny firesahana am-paosy dia hanomboka handre izy ireo.
Ny paikadin'ny "ho be dia be isika (mividy) ary noho izany dia horaisin'izy ireo ho ekena isika" dia mazava kokoa fa tsy mandeha izany.
Ankehitriny, raha tsy ..
nVIDIA tsy mandeha amin'ny Linux ary ankehitriny koa AMD / ATI.
Mampalahelo ny fanapaha-kevitr'ity orinasa ity, heveriko fa amin'ny lafiny ampiasantsika mpampiasa Linux, amin'ny manaraka hieritreretana ny fividianana solosaina dia tsy maintsy ataontsika izay tsy AMD.
Hatramin'izao dia manana solosaina finday AMD Radeon aho ary ny marina dia nila fampianarana sy ora maro aho hanomanana ny sary, noho izany dia nanapa-kevitra aho fa ho an'ny manaraka tsara indrindra dia ny Intel.
Miaraka amin'ny sary Intel CPU sy AMD aho, ary avy amin'ny zavatra niainako dia tsy mieritreritra aho fa ny nVidia dia hanao tsaratsara kokoa ... ho ahy, raha tsy hoe maka zavatra izay mampiova ny saiko izy ireo, heveriko fa hanohy ireo configurations toa ahy aho. efa lasa lavitra ...
Ny zavatra mampalahelo indrindra dia ny safidin'ny mpamily AMD maimaim-poana dia ratsy kokoa noho ilay misy tompony. Ny loko mainty sy ny algarety dia na aiza na aiza.
Heveriko fa tsy misy mahalala ny antony noroahana azy ireo nefa efa mikorontana sy mandrahona ny tsy hividy ny rehetra. Moa ve noho ny tsy fetezan'izy ireo momba ny Linux? Aleo ianao manadihady ny antony nandroahana azy ireo, raha misy fiantraikany na tsia amin'ny lafiny fanohanany ny Linux fa tsy miresaka, miantsoantso ary mandrahona ilay adala.
Marina izany, izany no eritreritro. Tsy hitako izay antony hitodihana milaza fa tsy hividy vokatra AMD intsony aho noho izany antony izany, farafaharatsiny izao.
Heveriko fa ny antony dia ny hanavaozana ny modely manohana ny karatra ATI. araka ny nolazain'izy ireo tetsy ambony… Ho avy eo amin'ny Linux i Steam… ary hahafantatra ny fiantraikan'ity hetsika ity amin'ny ATI sy Nvidia
Na dia manome aingam-panahy tsy fahatokisana aza ity vaovao ity, dia manoro hevitra ny lehilahy aho mba tsy hanao fehin-kevitra raha tsy misy vaovao bebe kokoa, xD Ahoana raha demonia mainty izy ireo nanimba ny mpamily? sangisangy ajajaj xD, fa mitandrema, miandry vaovao fanampiny
Tsy milaza an'ity vaovao ity aho, tsy raharahako ny antony noroahana azy ireo. Taliban an'ny processeur Intel sy sary Nvidia aho ary mbola tsy nividy na hividy na inona na inona AMD / ATI na dia mandoa ahy aza izy ireo hividy azy.
Tsy tia ahy mihitsy ny AMD / ATI, efa naharikoriko ahy tamin'ny fiandohany tamin'ny 2005 izy ireo.
luchus dia hoy izy:
miaraka amin'ity haavo ity dia mitovy amin'ny intel, tsy maintsy mijery ny ARM na MIPS aho
Mamaly an'i luchus
kebek dia hoy izy:
Raha ny vaovao dia mandeha tsy misy milaza fa ireo mpamorona voaroaka dia ao anatin'ny vondrona voafantina (saingy tsy sambatra) amd mpiasa voaroaka, noho ny olana ara-bola, nahena 15% ny mpiasa amd.
Mamaly an'i kebek
lehilahy dia hoy izy:
Ka ampiako amd amin'ny lisitra maintiko 😛 (miaraka amin'ny SiS, huawei sy ny hafa izay manasarotra zavatra fotsiny). Nandritra ny taona vitsivitsy taorian'ny nivoahako ny solosaina intel iray manontolo niaraka tamin'ny OpenSuse mivantana ary tsy nangataka na inona na inona handeha aho araka ny tokony ho izy (eny fa na dia eo aza ny fikandrana KDE gelatinous), dia tsapako fa io ihany no fitaovana manome tohana feno ho an'ny linux. Nandeha ihany koa i Nvidia, fa ny fahasamihafana misy amin'ny mpamily OS hafa dia tena tsikaritra.
Mamaly an'i marito
Ny zava-misy fa ny CPU dia Intel dia tsy antoka na inona na inona miaraka amin'ny sary ary mifototra amin'izany dia tsy azo lazaina fa ny maodely sary natokana rehetra izay tsy Intel dia hanome anao olana.
Ny Intel dia tsy manao CPU fotsiny fa manao motherboard, chipsets ary sary hifehezana sary, karatra tambajotra sns. Rehefa manangona kernel ianao dia mahatsikaritra ao amin'ny modules ny fahasamihafana lalina izay misy ny fanohanana amin'ny marika hafa. Ary tsy anjely izany ... misy celerona sasany voasakana amin'ny linux amin'ny alàlan'ny fifanarahana amin'ny MS. Hatreto dia mbola tsy nahita sary avy amina marika hafa izay miasa tsara aho raha tsy misy zavatra hafahafa (tranga mihoapampana any nvidia miaraka amina openuse mitovy ihany http://bitly.com/RbGzPZ ). Andrasana fatratra ny tsy hividy amd intsony, satria marika manan-danja sy manana kalitao io, fa ny iray manao laharam-pahamehana rehefa misafidy, na dia toy izany hatrany aza, hisy fiantraikany eo amin'ny lafiny toekarena.
Amin'ity taha ity dia hiova ho ARM = S aho
Mampihoron-koditra izaitsizy, zavatra tsy misy dikany ... Andriamanitra ô xd
Mampihomehy ny fanehoan-kevitra sasany ... Ny maha-AMD anao ao amin'ny GNU / Linux dia saika mifanitsy amin'i Intel:
AHHHHHHHHHHH Vao avy nividy processeur apu tamin'ny AMD aho ary tsy mampiasa windows ary manapaka ny feo raha mijanona video aho amin'ny vlc precise-12.04 dia mila manemotra azy 10sec aho hamerenako azy ary ny lesoka kely amin'ny sary E-350 dia mandeha tsara fa mety ho tsara kokoa ny A6 mbola tsy nanala azy ireo tao anaty boaty hoe iza no manome + 🙂
Voalohany dia mila miandry ianao, inona no tena antony nahatonga ny orinasa nanapa-kevitra
Apple dia namoaka ny iOS 6.0.1
Amidy: Vulnerability amin'ny Windows 8